ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: ထေရ၀ါဒ နဲ့ မဟာယာန ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှု ကို လေ့လာခြင်း
ထေရ၀ါဒ နဲ့ မဟာယာန ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှု ကို လေ့လာခြင်း
ထေရ၀ါဒ နဲ့ မဟာယာန ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုကို သုံးသပ်ရာမှာ သံဃာသနာတင်မှတ်တမ်းတွေဟာ မပါမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး (၃) လ အကြာမှာ အရှင်မဟာကဿပ ဦးစီးပြီးတော့ ပထမသံဃာယနာကို ရာဇဂြိုလ်မှာလုပ်တာ သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ အရှင်မဟာကဿဖ ရဲ့ သုံးသပ်စီမံပုံ ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ။ ဘုရားရှင်ခေတ် ရဟန္တာပေါင်း သောင်း၊သိန်း ချီပြီးရှိနေတဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အရှင်မဟာကဿဖ က သံဃာယနာအတွက် အဖွဲ့ဝင် (၅၀၀) ပဲ ရွေးချယ်မယ်လို့ ကြေငြာတယ်။ သံဃာ ယနာ (၆)ကြိမ်မှာ ရဟန်းအရေအတွက် (၅၀၀)ပဲ ၊ ပင့်ဆောင်တာ (၂) ခုပဲရှိတယ်။ ပထမနဲ့ စတုတ္ထ အကြိမ်တွေပေါ့ ။ စတုတ္ထကတော့ စစ်ပွဲတွေနဲ့ တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်တဲ့ ကာလမို့ (၅၀၀) ပဲ တက်ရောက်တာ သဘာဝကျပေမယ့် ပထမသံဃာ ယနာကတော့ ဒီထက်များသင့်တယ်လို့ ယူဆရတယ်။ဒါပေမယ့် အရှင်မဟာကဿပ က အဖွဲဝင်ရွေးချယ်မှုအတွက် အချက်(၂)ချက် ကန့်သတ်လိုက်တယ်။
(၁) ရဟန္တာ စင်စစ်ဖြစ်ရမယ် ။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ရဟန္တာ စင်စစ်ဖြစ်မှ အဂတိတရား(၄) လိုက်စားမှု ကင်းမယ်။ သံဃာယနာ အခမ်းအနားမှာ ငါ့ဆရာရဲ့ နည်းကမှ မှန်တာ ၊ ဒီနည်းက မမှန်ဘူး စတဲ့ ငါစွဲ၊ဆရာစွဲကင်းမယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းပေးပုံတွေ အဘိဓမ္မာပိုင်းတွေ မှာ ဆရာဝါဒတွေ ပါနေလို့ ဖြစ်တယ် ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင် အငြင်းပွားတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိလ်ိမ့်မယ် ။
(၁) ဘုရားဟောတရားတော်များအားလုံးကို အရေအတွက်၊ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ် အတိအကျတင်ပြရမယ်။
(၂) ရဟန္တာဖြစ်အောင် တရားကျင့်ရမယ်။(မလွယ်ဘူးနော် ၊ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးပဲ ရှိတယ်။ အရှင် အာနန္ဒာ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ တရားတော်တော်နဲ့ မတက်နိုင်တာတွေ ၊ ရက်နီးလာလို့ Pressure များလာတာတွေ အများကြီးပဲ )ထားပါတော့ ။ အရှင် အာနန္ဒာရဲ့ ၀န်ခံချက်ရပြီးတာနဲ့ အရှင်မဟာကဿဖ က ဒီ ရဟန္တာ (၅၀၀) ကလွဲရင် တခြားသံဃာတွေ အားလုံးရာဇဂြိုလ်က ထွက်သွားရမယ် ။ တခြားဒေသတွေမှာပဲ ၀ါ ဆိုရမယ်လို့ အမိန့် မှတ်တယ်။
ဒီတော့ သံဃာယနာမှာ ဘာတွေကို ပယ်မလဲ ဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတော့ အရှင်မဟာကဿဖ က - “…ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရှင်မြတ် ပြုထားတဲ့ အရာတွေကို ဗုဒ္ဓရှင်တော်သာ ပယ်ဖျက်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ တို့က ပယ်ဖျက်တယ်ဆိုပါတော့ ၊ ပုထုဇဉ် ရဟန်း၊ရှင်လူတွေက ကြည့်စမ်း - ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့ တေဇောဓာတ်တောင် မငြိမ်းချင်သေးဘူး၊ သူ့တပည့် ဆိုတဲ့ သံဃာတွေက သူ့စကားတွေကို ပယ်ကုန်ကြပြီလို့ ဆိုကြလိမ့်မယ်။ ဒီလို အကြည်ညိုပျက်ရင်( ရဟန္တာတွေကို စော်ကားပြောဆိုမိရင်) သူတို့ အပြစ်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ် ။ဒီတော့ ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားချမှတ်ခဲ့တဲ့ ၀ိနည်းတွေကို နဲနဲမှ မပြင်ကြပါနဲ့ ….” လို့ မိန့်ကြားခဲ့တယ်။ ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး (၆)ယောက်ရဲ့ တပည့်တွေကလည်း ခေါင်းထောင်လာဦးမယ်။
ဒီ ဂိုဏ်းကြီး (၂)ဂိုဏ်းကနေ မကြာခင်မှာပဲ (၁၀) ဂိုဏ်းအထိ ဖြစ်သွားတယ်။ အခုတော့ ( ၃၀၀ ) ကျော်နေပြီတဲ့ ။ ဂိုဏ်းတွေ ကွဲသွားကြပုံကို ( သံဃာယနာသမိုင်း စာအုပ်မှာ ဖတ်ပါနော် ။ မရေးတော့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ မဟာယနတွေကတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်မှာချက်ကို ကိုင်စွဲပြီး ကြိုက်သလို ပြင်ကြရာကနေ ဒီလောက်ကွာကုန်ကြတာပဲ ။ သူတို့ကလည်း ဘုရားမှာသွားတာပဲ ၊ လိုအပ်ရင်ပြင်မယ်လို့ ခံယူထားတော့ မှန်သလိုဖြစ်နေတာပါပဲ ။ အကြီးအကျယ်ကွာတာက၀ိနည်း ပိုင်းမှာပေါ့ ။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အောက်မှာ ဆက်ရှင်းပြမယ်။ ဒီတော့လည်း မူရင်းအတိုင်း မပြင်တာက ထေရ ၀ါဒ …မထေကြီးများ၏ ၀ါဒလို့ ဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့ အဓိက (၂)ခုရဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုကို စပြောရအောင်။ Ven. Dr. W. Rahula ရဲ့ Theravada-Mahayana Buddhism စာအုပ်ကို ပြန်ုပြီး ကိုးကားပါမယ်။ မူရင်းကိုလဲ ရေးပေးပါမယ်။
ထေရ၀ါဒနဲ့ မဟာယာန ဘာကွာလဲ ။
(၁) နှစ်ဖက်လုံးက သကျမုနိ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာကို ဆရာ အဖြစ်လက်ခံကြတယ်။
(၃) မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး လမ်းစဉ်ဟာလဲ နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ တရားပါပဲ။
(၄) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ဒေသနာတော်ဟာလဲ နှစ်ဖက်လုံးမှာ အတူတူပါပဲ။
(၅) ဖန်ဆင်းရှင်ကို နှစ်ဖက်လုံးမှာ လက်မခံပါဘူး။
(၆) အနိစ္စ ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ နဲ့ သီလ၊သမာဓိ ၊ပညာတွေကို နှစ်ဖက်လုံးက လက်ခံကြတဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ အဓိက တရားအနှစ်တွေမှာ မကွဲပြားဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။
အနတ္တ ကို နှစ်ဖက်လုံးလက်ခံပါတယ်။ မဟာယနက အတ္တ၀ါဒ မဟုတ်ပါဘူး။ အကိုလည်း မဟာယန ဆရာတော်တွေကို မေးကြည့်ဖူးပါတယ်။ အတ္တ၀ါဒ ကို သူတို့လည်း လက်မခံပါဘူး။
These are the most important teachings of the Buddha and they are all accepted by both schools without questions.
ဖားအောက်ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားတဲ့ ဓမ္မစကြာနှင့် ၀ိပဿနာ တရားတော်မှာလည်း ဒီအကြောင်းတွေပါ ပါတယ်။ မဟာယာန မှာ က အရဟတ္တဖိုလ်ရပြီးသာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီ အရဟတ္တဖိုလ်ကနေ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုလို့ မရသေးဘူး။ အရဟတ္တဖိုလ်ကနေ အနာဂမ် ၊ သကဒါဂမ် ၊ သောတာပန် အထိ ပြန် လျှောကျသွားတယ်။ ပုထုဇဉ်ပြန်ဖြစ်သွားရမယ် ။ ပြီးမှ ဘုရားဆုပန်ပြီး ဘုရားဖြစ်ဖို့ ပြန်ကြိုးစားကြရမယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆရာတော်ကြီးက ဘုရားဟောနဲ့ သူတို့ အယူအဆ လွဲနေကြောင်း (၂)ချက်တုတ်ပြတယ် ။
ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာ ပါတယ် ။
(၁) အကုပ္ပါမေ ၀ိမုတ္တိ (စေတောဝိမုတ္တိ -မူကွဲ ရှိတယ် ) = အရဟတ္တဖိုလ် ဥာဏ်တော်သည် မပျက်မစီးနိုင် ခံ့ခိုင်တည်တံ့လေပြီ ။
(၂) အယမန္တိမာ ဇာတိ ၊ နတ္ထိ ဒါနိ ပုန ဗ္ဘဝေါတိ = ဒီဘ၀သည် နောက်ဆုံးတည်း ၊ ဘ၀အသစ်ဖြစ်ရန် မရှိတော့ပြီ ။ တဲ့ ။
ဒီ (၂) ချက်မှာတင် ဘယ်ဝါဒ ဟာပိုပြီး ဘုရားဟောနဲ့ ညီ မယ်ဆိုတာ သိသာနေပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်သည် ကမ္ဘာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရသည် ရွာလေးတရွာကဲ့သို့နယ် မျက်စိပွင့်နားပွင့်နေကြပေပြီ မဟုတ်ပါလော။ယနေ့ခေတ်သည် အရင်ခေတ်နှင့်မတူညီသလို။အရာအားလုံးသည် အိုင်တီခေတ်လို့ပြောစမှတ်ပြုနေကြပြီ ။ ပြောလိုရင်းသည် မဟာယန နှင့်ထေရ၀ါဒ သည် တူချင်ပေ၏။သို့သော် မတူညီလှ။စရိုက်ပုံသဏ္ဍာန်တူညီချင်သော်လည်း အနှစ်သာရကားမတူညီချေ။ အမှားအမှန်ခွဲခြားတတ်နိုင်ကြပါစေ လို့..။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 9:55 AM